Umjaho ICelbridge Clane Kildare I-Leixlip Maynooth Naas Newbridge
ICelbridge, osebeni loMfula iLiffey nemizuzu engama-30 kuphela entshonalanga yeDublin, iyindawo ecebile ngamagugu, kufaka phakathi amasayithi amaningi obuKrestu basendulo kanye nefa elihle lezindlu ezinkulu ezinezindaba ezimangazayo.
Landela ezinyathelweni zika-Arthur Guinness, mhlawumbe igama elaziwa kakhulu e-Ireland, uphumule ngopende kwelinye lamahostela asemgwaqweni omkhulu ophawula lapho azalelwa khona. Isifanekiso sakhe sobukhulu bokuphila sibonisa le ndawo eyisithonjana lapho achitha khona iningi ebuntwaneni bakhe. Ukusuka lapha ungalandela iNdlela ka-Arthur iye e-Ardclough lapho kunesikhungo nombukiso okuhumushekayo, bese uya phambili e-Oughterard Graveyard - indawo yakhe yokugcina yokuphumula. Zulazula emlandweni kuCelbridge Heritage Trail - usuka ku-Christian Tea Lane yakuqala, indawo yokuphumula yamaGrattans; kuNdlu kaSomlomo uConnolly's Castletown House - indawo yokuhlala enhle kunazo zonke e-Ireland; bese udlulela emlandweni waseCelbridge Village uthatha umzila onokuthula ongasemfuleni noma umgwaqo ogcwele umuthi ovakashele emagcekeni aseCelbridge Abbey nezixhumanisi eziya kuJonathan Swift. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, kungani ungajabuli ukugibela isikebhe wehle ngomfula iLiffey, ibhodi eligwedla eCliff of Lyons noma umjikelezo ogudle iGran Canal ngaseSallins.
Ukubukwa Okuphezulu eCelbridge
Indawo yokudlela yezinkanyezi ezimbili iMichelin ebungaza umkhiqizo wendawo, oholwa nguChef Jordan Bailey, owayengumpheki oyinhloko eMaemo enezinkanyezi ezintathu e-Oslo.
Izwa ubukhazikhazi beCastletown House namapaki, isithabathaba somuzi wasePalladian ku County Kildare.
Ihhotela likanokusho elihlala eqoqweni elingajwayelekile lezakhiwo ezinembali yama-rose, kufaka phakathi isigayo kanye ne-dovecot yangaphambili, emaphandleni aseKildare.
Isikhungo Somuzi wase-Ardclough
Isikhungo i-Ardclough Village Centre sinezindlu ezithi 'From Malt to Vault' - umbukiso oxoxa indaba ka-Arthur Guinness.
Umzila weCelbridge Heritage Trail
Thola iCelbridge neCastletown House, ikhaya lezindaba eziningi ezithokozisayo kanye nezakhiwo zomlando ezixhuma kunqwaba yamanani abalulekile asendulo.
IGuinness Storehouse ingahle ibe yikhaya le-tipple edumile kepha ujule ujule kancane bese uthola ukuthi indawo yayo yokuzalwa ilele lapha e-County Kildare.
Imihlahlandlela nemibono yohambo
Izinto Eziyishumi Ezinhle ongazenza Around Leixlip & Celbridge
Ukuhamba Okuphezulu eKildare
Buza Endaweni: Ikuphi Indawo yokudlela Enothando Kildare?
Buza Indawo: Ungaziletha Kuphi Izivakashi eKildare?
Ukuqhakaza okumangalisayo: Izingadi ezinhle kakhulu zikaKildare
Landela ezinyathelweni zika-Arthur Guinness
Izindlu Ezinkulu Nezikhathi Ezinzima
I-Local Tour Guide Yazi I-Celbridge Njengencwadi
Thola okuningi ku-Celbridge
I-Airtastic Entertainment Centre Celbridge
Amagugu NomlandoUkuhamba Izintaba
Indawo yokudlela iMill & Terrace
Ubuciko NamasikoIzinsuku ezinethayo
Amagugu NomlandoIzindlu & Izingadi